Induction Susceptor Ukushisa emikhiqizweni yezimboni
Isebenza kanjani i-Induction Susceptor Heating?
I-susceptor isetshenziselwa i- Ukushisa ukufakelwa okokusebenza okungahambisi izinto njengama-ceramics nama-polymers. I-susceptor ishiswa ngohlelo lokushisa lokungeniswa, lapho i-conduction idlulisela khona ukushisa ezintweni zomsebenzi. Ama-Susceptors avame ukwenziwa nge-silicon carbide, i-molybdenum, i-graphite, izinsimbi ezingenazinsimbi nezinye izinto eziningi eziqhutshwa kahle.
Ngokushisa kwe-susceptor, sisebenzisa i-induction ukushisa i-susceptor yensimbi eqhubekekayo, bese ishisa into yesibili ngokuxhumana ngqo noma ngemisebe.
Kuyini i-Induction Susceptor Heating?
Ukushisa kwe-Susceptor yi-Induction kusetshenziswe kakhulu kuzinqubo lapho okubalulekile ukuthi ukufudunyezwa kungasebenzi ngogesi noma kungashisi kalula ngokulinganayo ngokushisa kwe-induction. Zombili izingxenye zensimbi nezingezona ezensimbi zingafudunyezwa ngokungaqondile ngokusetshenziswa kwe-susceptor, kufudunyezwe ngokufakwa. Abasusayo bangathintana noma bahlukaniswe nengxenye noma into ezofudunyezwa. Lapho kuthintwa ukufudumeza kutholakala ngokuqhutshwa, lapho ukwahlukanisa okufudumele kungokwemisebe.
Igama elithi 'susceptor' njengoba lisetshenziselwa ukufudumeza kokungeniswa lisho okokusebenza okuhamba ngogesi okubekwe phakathi kwekhoyili yokushisa yokungeniswa nezinto ezizofudunyezwa njengendawo yokusebenza, kungaba okuqinile, islurry, uketshezi, igesi, noma inhlanganisela ethile okungenhla. Ngendlela elula kakhulu, i-Induction Susceptor Heater ingaba ithubhu lensimbi elifakwe phakathi kwekhoyili nezinto ezizofudunyezwa. I-susceptor enjalo ishiswa kalula yinsimu ye-elektromagnetic esungulwe yikhoyili yokungeniswa ukuze ingxenye ifudunyezwe ngokuyinhloko ngemisebe noma ngokuqhutshwa komshini oshisayo. Ukusetshenziswa kwe-susceptor kunikeza izindlela eziphumelelayo zokufudumeza izinto ezingezona ezokuziphatha ezinjengobumba, ingilazi, amapulasitiki, ama-semiconductors, amakhemikhali aphilayo nawona angewona awokuphilayo, ukudla, iziphuzo ngokusebenzisa ngokunemba kokulawula, ukusebenza kahle, ukukhuphuka ngokushesha, nokwethembeka izinzuzo zokusebenzisa i-induction heat generator / ugesi. Imiklamo nempahla ye-HLQ imishini yokushisa ye-induction kusuka kumashubhu alula kuya kuma-conveyors afudumele, ama-auger, nezinye izakhiwo eziyinkimbinkimbi.
Ama-Susceptors angakhiwa futhi aqashwe ukuvikela / ukuvikela izindawo zengxenye engeke inikezwe inkambu yokungeniswa ngaleyo ndlela ilawule iphethini yokushisa etholakele. Kwezinye izimo, lokhu kubizwa ngokuthi ukuguqula noma izihlangu. Ezimweni ezinjalo, i-susceptor ihlanganisa ingxenye yengxenye eyivikela ngogesi. Uma i-susceptor ingayizungezi ngokuphelele le ngxenye, ukufudumeza kuyokwenzeka ngasikhathi sinye ngokufudumeza ngokungenisa okuqondile ezindaweni ezingavikelekile kanye nemisebe kanye nokuqhuba okuvela ku-susceptor. Ezimweni eziningi ama-susceptors avikelayo akhiwa ngethusi elipholile ngamanzi lapho izingxenye ezivikelwe zengxenye zingafudunyezwa nakancane.
Ngokuyisisekelo, ukufudumeza i-susceptor usebenzisa i umthombo wokushisa wokungeniswa imane imisebe kanye / noma ukufudumeza kokuqhuba. Noma kunjalo, izici eziningi ziyenza ivumelane nezimo kakhulu. Okokuqala, i-susceptor ishiswa ngogesi, ivumela ukufudumeza nge-quartz, ingilazi, noma amanye amakamelo asobala kagesi okuqukethe nokulawula umoya. Okwesibili, i-susceptor ezacile isebenza njengomthombo wemisebe ongashiswa futhi upholiswe ngokushesha uma ufisa, kwakha umthombo wokushisa ongashintsha ukushisa ngokushesha okukhulu. Ukushisa kwe-induction ukuthi i-susceptor ivumela ukuthembeka okuphezulu ngenxa yokuthi i-susceptor esezingeni eliphakeme kakhulu akudingeki ukuthi ixhunywe kumqhubi wamanje ophakeme ukunikeza amandla adingekayo okushisa. I-susceptor ingaba nobukhulu buphi. Ezingxenyeni ezine-geometry eyinkimbinkimbi, i-susceptor ithuthukisa ukufana kokushisa, uma kuqhathaniswa nokushisa okuqondile kwe-induction. Ama-Susceptors avumela izinto ezincane kakhulu ezifana nemichilo yensimbi noma izintambo ukuthi zifudunyezwe emazingeni okushisa aphakeme kusetshenziswa amaza amaningi kazibuthe aphansi naphakathi. Lapho kubhekwa ukwakheka kokushisa kwe-susceptor kunezinto eziningi ezingena ekukhetheni izinto ezifanele ze-susceptor, lokhu kufaka phakathi ukuphinda kusebenze nemvelo lowo othintekayo ahlangana nayo. Ukukhetha izinto ezifanele kuholela ohlelweni oluthembekile, ukukhetha izinto ezingalungile kungaholela ekungcoleni nasekusebenzeni okuthembekile.
I-Induction Susceptor Heating Izicelo
Abasolwa benza Ukushisa kwe-induction kuyasebenza ukufudumeza yonke into engeyona eye-metallic kanye ne-metallic, evumela ukufakwa kwe-induction ukuthi kube yithuluzi elibalulekile ekukhiqizweni kokudla neziphuzo, Amakhemikhali, i-Electronics, ingilazi, ama-plastiki, irabha, ukwakhiwa, ezokwelapha zabathengi, nemikhiqizo yezimboni.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi thenga i-Susceptor Heater, HF Susceptor Ukushisa, Isebenza kanjani i-Induction Susceptor Heating, Induction Susceptor Heater, Induction Susceptor Ukushisa, i-susceptor, susceptor wesiFudumezi, Intengo ye-Susceptor Heater, I-Susceptor Heating, Isimiso Sokususa Isisusa, I-Susceptor Heating theory, Kuyini i-Induction Susceptor Heating Imeyili kwemikhumbi